Tafatafa “farany” niarahana tamin’ilay mpanefoefo Rosiana Boris Berezovsky · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Avrily 2019 4:12 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Aprily 2013)
Namoaka [amin'ny teny Rosiana] ny “tafatafa farany” niarahana tamin'ilay Rosiana mpanefoefo efa maty, Boris Berezovsky [GV amin'ny teny Anglisy] i Pavel Pryanikov, ao amin'ny bilaogy ttolk.ru (Blog Tolkovatelya, ny bilaogin'ny mpanazava). Araka ny filazan'i Pryanikov, nifantoka momba ny boky natokana ho an'ireo Rosiana mpitsoa-ponenana ara-politika any Angletera ny tafatafa, ary natao roa andro talohan'ny 23 Martsa 2013, daty voalaza fa namonoan'i Berezovsky tena tamin'ny alalan'ny fanantonan-tena. Tsy tahaka ny tafatafa tamin'i Berezovsky navoakan'ny fanontana Rosiana, Forbes [amin'ny teny Rosiana, izay toa ketraka sy malahelo mba tsy hilazana hoe te-hamono tena ity mpandraharaha an-tsesitany ity, fa toa be fanantenana kokoa izy raha niresaka tamin'ny mpampita vaovaon'ny Pryanikov, ary miresaka momba ny tetikasany ho avy sy ny politika Rosiana. Nadikan'ny RuNet Echo ny sasany tamin'ireo fanambarany, izay ho hita eto ambany.
Berezovsky nitafatafa tamin'ny Sky News, tao anatin'ny andro tsara kokoa. Pikantsarin'ny YouTube, 4 Aprily 2013.
Nanontaniana izay ho ataony raha afaka manao izany izy, hoy izy namaly:
На самом деле время подведения итогов ещё не наступило. А вот через 20 лет я вам на этот вопрос отвечу. […] Наслаждение в моей жизни только одно: думать о будущем. В будущем я надеюсь жить где-нибудь за городом, под Москвой, где прошло моё детство.
Raha ny marina, mbola tsy tonga ny fotoan'ny tombam-bokatra. Saingy hamaly izany fanontaniana izany aho afaka 20 taona. […] Fahafinaretna iray ihany ny eo amin'ny fiainako, dia ny mieritreritra momba ny hoavy. Manantena ny hiaina any ho any, any ambanivohitra, ivelan'i Moskoa, izay niainako nandritra ny fahazazako aho amin'ny ho avy.
Mikasika ny maha-samihafa ny Jiosy sy Rosiana (Jiosy i Berezovsky saingy milaza fa tsy mandray azy ho izany) :
Inona no herin'ny Jiosy raha oharina amin'ny Rosiana? Ny tsindrimandry. Tsy misy kajikajky. Araka izany, dia mpanadihady tsy manjary aho, tsy mahay kajikajy aho, tsy mahay fanorom-bazaha aho. Saingy amin'ny fomba mistery, toa tsapako izay hitranga atsy ho atsy. Mba hilazana izany fahasamihafana izany amin'ny teny lozika, mihevitra amin'ny alalan'ny tsoa-kevitra ny Rosiana, ary ny Jiosy amin'ny fanesoran-kevitra.
Mikasika ny toetra Alemàna voalaza fa ananan'i Poutine:
Voalohany indrindra dia rosiana i Poutine. Ohatra, mety ho namana sy fahavalo izy, ary amin'ny olo-tokana sy mitovy izany — toetra tena manavaka ny Rosiana.
Mikasika ireo mpanao politika tandrefana sy ny fanohanan'izy ireo ny fahefan'i Poutine:
Diso fanantenana tanteraka tamin'ireo mpanao politikan'ny Tandrefana aho tao anatin'ny 10 taona, noho ny tsy fananan'izy ireo finiavana, sy noho ny hadalan'izy ireo. Tsy hitan'izy ireo ny eo anoloan'izy ireo, tsy mahatakatra tanteraka ny fomba fiasan'ny tontolo ankehitriny izy ireo.
Mikasika ny hikendrena an'i Poutine amin'ny alalan'ireo sangany manana kaonty amin'ny banky, ny fianakaviana sy ny fananana tany aman-trano any Andrefana:
Ahoana no hadanjana azy ireo? Tsotra fotsiny: foanana ny visa an'izy ireo. Tsy ilaina ho an'ny olona 2 hatramin'ny 5 arivo, ampy ny 200. Faharoa, ny fifehezana tanteraka sy ny fanakanana ny kaonty. Izay ihany, tsy mila fanampiny. Hivoaka izy ireo, izy tenany. Poutine ny tongony no eo aloha.
Ary ny mpanohitra rosiana?
Iray amin'ireo olana goavana misy ankehitriny ao amin'ny hetsiky ny mpanohitra ny tsy fisian'ny foto-kevitra tsara.
Roa andro taty aoriana, hita faty i Berezovsky. Raha voaporofo ara-pizahana tokoa fa tena ketraka ara-tsaina izy, dia azo antoka fa hiteraka adihevitra momba ny fahafatesany ity tafatafa ity, ary hampahery ireo izay mihevitra fa tsy namono tena izy.